July 2008 | ပျူနိုင်ငံ
သခင်ဗစိန်နှင့် သခင် ထွန်းအုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ ရဲဘော် သုံးကျိပ် ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လျာထားခြင်းခံရသော သခင် သန်းတင် (၂) (ဗိုလ်မြဒင်) ဇင်းမယ်တွင် ကွယ် လွန်သွားသော အခါ အရိုးပြာကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် သယ်ဆောင် လာစဉ်။
Posted by ကိုအောင် at 00:500comments
Posted by ကိုအောင် at 22:51 1 comments
“ငါတော့ အဲလို လက်နက်ကိုင် ဖြေရှင်းမှုကို လက်မခံဘူး၊ ထားပါ တော့ စစ်အစိုး
ရနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တဲ့ ပြည်သူတွေ၊ တဖက်နဲ့ တဖက် တိုက်ကြခိုက်ကြပြီး၊
အနည်း ဆုံးတော့ အပြစ်မဲ့တဲ့ လူတွေ သေကြေမယ်၊ သွေးချောင်းစီး စေတဲ့ ပုံစံမျိုး
မဟုတ်တဲ့ တခြား နည်းလမ်းတွေ ရော မရှိတော့ဘူးလား”
“နင်ကလည်း အခု နာဂစ် ဖြစ်လို့ သွေးချောင်းစီးရုံ မကဘူး ပင်လယ်ထဲပါ စီးနေပြီး”
“အာဏာရှင် စနစ် ကနေ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ကူးပြောင်းဖို့ ဆိုတာ
မြန်မာနိုင်ငံ လို လက်နက် အားကိုး အာဏာရှင် စနစ်ကို ခေတ် အဆက်ဆက်
အမွေ ဆက်ခံ ထားတဲ့ စစ်တပ်ကို ဒီလို လက်နက်ကိုင် နည်းလမ်းနဲ့ပဲ ရနိုင်မယ်
လို့ ငါတော့ ယုံကြည်တယ်”
“နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ၊ သံတမန် နည်းလမ်းတွေ နဲ့ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား”
“နင်တို့ အဲဒါ ခက်တာပေါ့၊ မြန်မာ စကားပုံရှိတယ်လေ၊ လူလိမ္မာသား ယဉ်ပါး ..
လူ မိုက်သား ရမ်းကား … ဆိုတာ၊ လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင် က တစ်ပါတီ မဆလ
အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း စီက ဆင်းသက် လာတာလေ”
“အပျိုကြီး … တော်သွားပြီး .. တကယ် ပါ.. ဒီနေရာမှာ .. လုံးဝ .. ချီးကျူးတယ် ”
“ဟား .. ဟား … ” (ရယ်သံများ)
“မင်းတို့ တော်တော် တရားကျဖို့ ကောင်းတယ်နော်၊ ပြည်ပမှာ လည်း လွတ်ရာ
ကျွတ်ရာမှာ လည်း နေသေးတယ်၊ ပြည်တွင်းက ဒုက္ခ မျိုးစုံ နေ့စဉ် ခံစား နေရတဲ့
သူတွေ ကို စစ်တပ်ကို စည်းရုံးပြီး တော်လှန်ရေး လုပ်ခိုင်းတယ် … တကယ် ဟာ
တွေ .. ကိုယ့်ဘာသာ လာလုပ် ဆရာတို့ ဆရာမတို့”
“ဟား … ဟား … ” (ရယ်သံများ)
“ငါတို့လည်း လက်ပိုက်ပြီး မနေပါဘူးေ.. … ရယ်၊ ပြည်ပ ကနေ ပြည်တွင်း အတွက်
ကျရာ အမျိုးသားရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင် မှာပါ”
“ဘယ်လို ပါဝင်မှာလည်း အင်တာနက် မှာ သတင်းဖတ်ပြီး၊ တီဗွီက လာတဲ့ အဖြစ်
ဆိုး တွေကို အမျှဝေ ပေးမယ့် ကူညီမှုမျိုးလား၊ … နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်
မြန်မြန် လာအောင် လုပ်ပေးပါဆိုတော့ .. ဟိုပြောလိုက် .. ဒီပြောလိုက်နဲ့ …
တယ်လေ .. ငါမပြောချင်ဘူး၊ မင်းတို့ အပြင်က တိုင်းပြည်ကို ချစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့
လူတွေ တစ်ခုခု ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တာဝန်ယူရင် ငါတို့လည်း အားရှိ
“ဟဲ့ … .. ကြီး၊ သူငယ်ချင်း .. စိတ်ဓါတ် မကျပါနဲ့ဟာ .. ငါတို့ အားလုံး တက်ညီ
လက်ညီနဲ ကူညီရင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ ပြေလည်မှာပါ၊ ဖြစ်မှာပါ”
“ဟုတ်တယ် .. … ကြီး၊ ငါတို့ ဘက်က လိုအပ်ချက်တွေ လည်း ပြောပါ၊ အား
“ငါ နည်းနည်လောက် ပြောကြည့်မယ်နော် .. မှားရင် .. ၀ိုင်း မရယ်နဲ့ …
“တင်းရင် လဲ လျှော့ မိေ.. ..၊ ဟား … ဟား” (ရယ်သံများ)
“ရဲရဲသာ ပြော မိေ.. ..၊ ဒီကောင်တွေ ကျောင်းမှာတုံး က နင့်ကို မရလိုက်လို့
အသဲကွဲပြီး .. အရက်ဆိုင်မှာ .. အကြွေးသွားသောက် တဲ့ ..အကောင်တွေ”
“အဲဒီတုံးက ငါတို့ အရက်ဆိုင်မှာ အကြွေးသွားသောက် တော့၊ နင်အဖေကို
တွေ့လိုက်သေးတယ်.. မူးလို့ … ခါးအောက်ပိုင်းမှာ … ပုဆိုး မရှိဘူး”
“ဟား … ဟား … ”(ရယ်သံများ)
“သေနာကောင် ငေ.. ..၊ မဟုတ်တာ လျှောက်မပြောနဲ့ ငါ့အဖေ အရက်လုံးဝ
မသောက်ဘူး .. ဘုရားနဲ့ တရားနဲ့ နေတဲ့သူ”
“ကဲ့ တော်ပါတော့၊ မြန်မာပြည် အကြောင်းတောင် ဘယ်နား ရောက်သွား သလဲ
မသိဘူး၊ နင်တို့ ပေါက်ကရ ပြောနေတာနဲ့”
“ငါ ပြောမယ် နော်၊ ငါအထင်တော့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်တုံးက ပြည်ပရောက် မြန်မာ
တွေ ထဲမှာ၊ အင်မတန် ကပ်စီးနည်း ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေတောင် တော်တော် စိတ်
မကောင်းဖြစ်ပြီး၊ မရှိ ရှိတာ လှူကြ တန်းကြတယ်၊ မြန်မာပြည် တစ်ခုလုံး အခုလို
နှစ်ပေါင်း များစွာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဘေးက တကယ်လွတ်မယ် ဆိုရင် လုပ်ပေးကြ
မှာပါ၊ ငွေရေးကြေးရေး လှူတန်းကြ မှာပါ”
“ဘယ်နေရာကို လှူရမှာလည်း ဘယ်သူတွေကို လှူရမှာလည်း၊ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံ
ရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး အခု ထောင်ထဲမှာလေ”
“ရှိပါတယ်၊ တော်လှန်ရေးကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်နေတဲ့ ကျောင်းသား
လူငယ် မျိုးဆက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်”
“လှူတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီး မသုံးစမ်းပါနဲ့ဟာ ဒါက ကိုယ့်အမျိုးသားရေး တာဝန်
ကိုယ့်နိုင်သလောက် ထမ်းဆောင်တယ်လို့ ခံယူစမ်းပါ”
“ကဲ့ ပြော တစ်လကို ဘယ်လောက် လှူရမလဲ .. အဲ မှားလို့ .. ဘယ်လောက် ထည့်
၀င်သင့်လဲ … ငါတို့က ကိုယ့်ဘာသာတော့ တာဝန်ယူတယ် … သူများတော့ ..လိုက်
ပြီး မစည်းရုံးချင်ဘူး … ပြည်ပရောက် တဲ့ မြန်မာတွေ က လူသာ နည်းတာ …ညီညွတ်
တယ်ဆိုတာ …. တခါမှ မကြားမိဘူး”
“ငါပြောပြမယ် နင်တို့ သေသေချာချာ နားထောင် … ဟဲလို…အားလုံး ကြားတယ်နော်”
“ကဲ့ ကြားပါတယ် ဆိုနေမှ နင်ကလည်း တမှောက်”
“နင်တို့ကို ငါ ပုံပြင် တစ်ခု ပြောပြမယ် ….
တခါ တုံးက ၀ိုင်အရက်တွေ အလွန်ပေါတဲ့ ကျေးရွာ တစ်ခုမှာ ရွာသူကြီး က
ရွာသားတွေ ကို ပြောတယ် … ငါတို့ တစ်အိမ်ကို ၀ိုင်တစ်ပုလင်း စီ… ယူလာပြီး …
အိုးကြီး တစ်အိုးထဲမှာ စုပြီး လောင်းထည့်ကြမယ် … ပြီးတော် အဲဒီ အိုးကြီးထဲက …
အိမ်မျိုးစုံက မတူညီတဲ့… ကွဲပြားခြားနား စွာ ချက်လုပ်ထားတဲ့ … ၀ိုင်တွေ ကို
တစ်ယောက် တစ်ခွက်စီ ..ယူသောက် ကြည့်ရင် အရသာ မျိုးစုံနဲ့ … အရမ်းကောင်း
မယ် … အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ဒီည လုပ်မယ် .. အိမ်တိုင်း ကိုယ့်အိမ်မှာ ချက်တဲ့ ၀ိုင်
အရက် တစ်လုံးစီ ယူလာခဲ့ လို့ ခိုင်းလိုက်တယ်။
အဲဒါ နဲ့ ညဘက်လဲ ရောက်ရော … သူကြီး လည်း သူ့အိမ်က ချက်လုပ်တဲ့ ၀ိုင်အရက်
ကို ယူမယ်လည်း လုပ်ရော … သူ့ခေါင်းထဲကို အိုင်ဒီယာ တစ်ခု ၀င်လာတယ် …
လူတွေ အကုန်လုံး … အိမ်တိုင်း ..အိမ်တိုင်း .. တစ်အိမ် တစ်ပုလင်း ၀ိုင်တွေ ယူလာ
မှာ… ဒီလို အနေအထားမှာ … ငါ … ပုလင်းထဲကို … ရေထည့်ပြီး .. စုပေါင်းအိုး ထဲ…
လောင်းထည့် လိုက်ရင် … ဒီလောက်များတဲ့ ၀ိုင် အရက် ပုလင်းပေါင်း များစွာ ထဲမှာ…
ငါ့ ရေ တစ်ပုလင်း မသိသာ ပါဘူး …. လို့ တွေး မိ တယ်။ ဒါနဲ့ သူကြီးလည်း ပုလင်း
ထဲ ရေထည့်ပြီး … ရွာသားတွေ အိမ် အလာ စောင့်နေ တာပေါ့။ မကြာခင်ဘဲ ရွာသား
တွေ တစ်အိမ် ကို ပုလင်း တစ်လုံးစီ ကိုင်ပြီး ရောက်လာ ကြတယ်။ သူကြီး အပါအ၀င်
ရွာ သားတွေ အားလုံး ပုလင်း ကိုယ်စီ နဲ့ အိုးကြီးထဲ စုပေါင်းပြီး လောင်းထည့် လိုက်
.. အားလုံး လောင်းထည့် လည်းပြီးရော … သူကြီးက … ကဲ့ ငါအရင်ဆုံး … စမ်းသပ်တဲ့
သဘော အနေနဲ့ … ငါ စသောက်မယ် ဆိုပြီး …. အိုးထဲ တစ်ခွက် ခပ်ယူပြီး သောက်
လိုက်တယ်။ သူကြီး လည်း တစ်ခွက်ကုန်အောင် သောက်ပြီးရော …. ဟာ ဘာအရသာ
မှ မရှိပါလား … ဟေ့ .. မင်းတို့ လာသောက် ကြည့်စမ်း … ငါတော့ … ရေသောက် နေရ
သလိုပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ရွာသားတွေ လည်း တစ်ယောက် တစ်ခွက်စီ လာယူ
သောက်ကြည့် ကြတာပေါ့။ သူတို့လည်း သူကြီးလိုပဲ ရေ အရသာကို တွေ့ရှိရတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ ရွာသား တစ်ယောက် က … အားရ ပါရ ရယ်မောပြီး… ကျနော် တို့
အားလုံး အကြံတူနေပြီး … အားလုံး ရေတွေပဲ ယူလာပုံ ရတယ်လို့ … ပြောတယ်။
အဲဒီတော့မှ သူကြီးလည်း အော် … လူတွေ အားလုံး … ငါလို ကြည်ပါပဲလား … လို့
… ငါပြောချင်တဲ့ ပုံပြင်လေး က ဒါပါပဲ၊ ငါတို့ အားလုံး ဒီပုံပြင်ထဲ က လို ရေတွေ ယူ
မလာ ဖို့၊ အရမ်း အရေးကြီးတယ်၊ တစ်ယောက်နဲ တစ်ယောက် တွက်ကပ် ပြီး ကပ်သီး
ကပ်ဖဲ့ တွေ မလုပ်မိဖို့ ငါ ဆိုလိုချင်တာပါ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးရှင်၊ သဘောပေါက် ပါတယ် … ”
“ငါလည်း တစ်ခု တွေးမိတယ်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုမင်းဇေယျကြီးတို့ အခုအဖမ်း မခံရ
ခင် ပထမ တခါ … သုံး … လေး လလောက် အဖမ်းခံရသေးတယ်လေ၊ ပြီးမှ ပြန်လွတ်
လာတာ၊ အဲလို သူတို့ အဖမ်းခံရ နေတဲ့ အချိန်မှာ … လွတ်ပေးဖို့ ကိုမြအေး ဦးဆောင်
ပြီး… စုပေါင်း လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆို တာ မှတ်မိလား”
“ အဲလို အချိန်မျိုး ကတည်းက အခု နာဂစ် မုန်တိုင်း မှာ ကူညီသလို … ငါတို့ တတွေ
.. စုစု စည်းစည်း… ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ခဲ့ရင် ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရတို့ ကိုဌေးကြွယ်
တို့ ကိုလှမျိုးနောင်တို့ ဦးဆောင် ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်နိုင်
တယ်… ဒီ အာဏာရူး သန်းရွှေ အစိုးရလည်း ပြုတ်ကျ နိုင်တယ်”
“ငါတို့ ငွေကြေး တစ်ခုတည်းနဲ့ မဟုတ်ဘူး၊ မိမိဘာသာ လည်း အရည်အချင်းတွေ
ပြည့်ဝအောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်၊ လက်လှမ်းမီရာကို လည်း ရသမျှ အင်းအား
တွေ စုစည်းထား သင့်တယ်၊ ငါတို့ တကယ်သာ အဲဒီလို ကြိုးစားပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ငါ
တို့ဟာ မွေးရပ်မြေ အတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အဖြစ် အသက်အရွယ်
ကြီးရင့် လာချိန်မှာ .. အဲဒီ ပီတိ ကို ရရှိကြမှာပါ”
“နာဂစ် ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးမှာ ရခဲ့တဲ့ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရေး စိတ်ဓါတ်နဲ့
ပြည်ပ ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ညီညွတ်မယ် ဆိုရင် ဒီအာဏာရူး စစ်အစိုးရ
ကို တော်လှန်တဲ့ နေရာမှာ အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်”
“လမ်းဘေး က လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးတဲ့ သူက ချီတက်တဲ့ အထဲ ပါဝင်မယ်၊ချီတက်
နေတဲ့ သူက နောက်ဆုံးမှာ လိုက်နေရာ က ရှေ့ဆုံးမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင် ကျော်လွှား
မယ် ဆိုရင် ငါတို့ တိုင်းပြည် ရဲ့ အနာဂတ် အများကြီး ပြောင်းလဲ လာမှာပါ”
“ဒါဆို ဘယ်တော့ စပြီး ကူညီဖို့ ပြင်ဆင်မလဲ”
“မနက်ဖြန် စမယ်၊ … ဒီနေ့ ပြီးနိုင်တဲ့ အလုပ်ကို မနက်ဖြန် မရွေ့ ပါနဲ့ .. ဆိုတဲ့ စကား
ပုံ နင် ကြားဘူးလား မိေ… ”
“အဲ မနက်ဖြန်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဟာ၊ ငါအလုပ်က နှစ်ပတ် တစ်ခါ ပိုက်ဆံရှင်းတယ်၊ ငါ့
ယောင်္ကျားက လကုန်မှ လစာ ရလို့၊ လကုန်ရင် .. ငါ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေ… ”
“ဟား … ဟား ..”(ရယ်သံများ)
“လကုန်မှ စမှာပါ၊ နင်ကလည်း၊ ကဲ့ အားလုံး သဘောတူလား၊ လကုန်ရင် အစီအစဉ်
“အိုကေ၊ ဒါဘဲနော် ငါ ကလေး ကျောင်းသွားကြိုစရာ ရော၊ ဈေးဝယ်စရာ ရော ရှိလို့
လိုင်းပေါ်က ဆင်းတော့မယ်၊ မြန်မာပြည်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ အားမဲ့ရက် တို့တတွေ
အင်တာနက် ပေါ်မှာ ဒီလိုဘဲ စုပြီး စကားပြောကြမယ် နော်”
“အခုပြောတဲ့ အစီအစဉ် အတိုင်း လကုန်ရင် ငါဖုန်းဆက်လိုက် မယ်၊ အဆင်သင့် ပြင်
“ရက်စ် … ”
(သူငယ်ချင်း တစု အင်တာနက်ပေါ်တွင် စုပေါင်း စကားပြောဆိုမှု ပြီးပါပြီး)
Posted by ကိုအောင် at 01:19 1 comments
(ကိုအောင်ကျော် ရေ အလေးပြုလျက်ပါ)
“ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရယ့် ဘ၀ကို နောက်မှ မေးလေ၊ ဘာဖြစ်
လို့လဲ ဆိုတော့ စိတ်ညစ်စရာ တွေ များလို့၊ နင်တို့ရော အဆင်ပြေကြလား အားလုံးပဲ”
“မှန်ကြောင် လိုင်းပေါ်မှာ ရှိလား ဆရာသမား၊ မလေးရှား မှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ”
“ဘဏ်ကို ဒမြတိုက်ဖို့ ကြံနေတယ်၊ မြန်မြန် ချမ်းသာအောင်”
“ငါ မလေးရှားက ဘောလုံးကွင်း တစ်ခုရယ့် နံဘေးက စာသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ အလုပ်
လုပ်တယ်၊ လစာတော့ မဆိုးပါဘူး၊ နေတာ ကတော့ ၀လုံးပေါ့၊ အိုဗာစတေလေ၊ တရား
“မှန်ကြောင် မင်းတို့ မလေးရှားမှာ တရားမ၀င် ခိုးပြီး အလုပ်လုပ် နေတဲ့ သူတွေကို
တရား ၀င်ဖြစ်အောင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် ထုတ်ပေးတာမျိုး ငါနေတုံးက တစ်ခါ
“အဲလိုသာ လုပ်ပေးရင် မလေးရှားကို မြန်မာ တပြည်လုံး ရောက်လာ လိမ့်မယ်”
“ဟား … ဟား …” (ရယ်သံများ)
“မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘ၀ က အရှေ့တောင်အရှ နိုင်ငံတွေမှာ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်
တွေလုပ်ပေးဖို့ မွေးလာရ သလိုပဲ နော်”
“အရင်တုံးက စကားပုံက … ကျွန်မှာ ကုလား၊ မယား တောသူ … ၊ အခု အဲဒါ ပြောင်းသွား
ပြီး၊ .. ကျွန်မှာ ဗမာ … မယား အင်ဒိုနီးရှား … အဲဒါကို မယုံရင် နင်တို့ မလေးရှားကို လာ
ကြည့်၊ ဗမာ အလုပ်သမား အများစုက ဈေးပေါပေါနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတာ၊ အဲ့မိန်းမ လိုချင်
ရင် အင်ဒိုနီးရှားမ တွေက ပေါလို့၊ .. မယား အင်ဒိုနီးရှားလို့ ငါတို့က ခေါ်တာ”
“ရဲကြီး … ရဲထက် … လိုင်းပေါ်မှာ ရှိလား .. ဆော်ရီးနော် မှန်ကြောင် .. ဆက်ပြောလေ”
“မြန်မာပြည် ကို မြန်မြန် ဒီမိုကရေစီ ရစေချင်တယ်ဟာ .. ဒေါ်စု အစိုးရ မြန်မြန်တက် စေချင်
တယ် … အခု ဒီမိုကရေစီရ အခုပြန်မယ်ဟာ၊ တကယ်ပဲ၊ သူများတိုင်းပြည် မှာ မျက်နှာ
အငယ်ခံပြီး မနေချင်ဘူး ”
(ပြည်လမ်းမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ အ၀င်အ၀သို့)
“ငါလည်း မင်းလို့ပဲ စစ်တပ် ဆိုရင် မုန်းလို့၊ ရေတောင် စစ်မသောက်ဘူး၊ ဘုံပိုင်ခေါင်း
၀မှာ ပါးစပ်တေ့ပြီး သောက်တယ်”
“မင်းတို့ အခုမှ ဒီစကားတွေ လာပြောနေတယ် ၉၆ ဒီဇင်ဘာ ပြဿနာ တက်တုံး က
ဆန္ဒပြပွဲ ပါကြ ဆိုတော့ မပါချင်ကြဘူး”
“ငါဆိုရင် အဲဒီတုံးက အိမ်က လူတွေ ကျောင်းအထိ ကားနဲ့ လာခေါ်သွားလို့ ပါ ဟာ
“ငါတို့ သူငယ်ချင်း အုပ်စုထဲမှာ မှန်ကြောင် တစ်ယောက်ပဲ မလေးရှား မှာ တရားမ၀င်
ဖြစ်နေတာ အဲဒါ ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံး ၀ိုင်းကူညီရင် ဒီကိစ္စ အေးအေးဆေးဆေးပါ ဟာ”
“နင်တို့ ကိုယ့်အသားထိမှ နာတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ဖျောက်ကြတော့နော်၊ ထိုင်း၊
မလေးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ နေရာစုံဘဲ မြန်မာပြည်သားတွေ ဒုက္ခ ရောက်နေ
“မင်းတို့ အပြင်မှာ နေတဲ့ သူတွေဘဲ ငြီးနေကြ၊ နာဂစ်ဖြစ်ခါစ က ရန်ကုန်မှာ ငါတို့
ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ သိလား”
“… … … လား ဘယ်တုံး က လိုင်းပေါ် တက်လာလဲ၊ ဒီမှာ လူအစုံဘဲကွ ပြောစမ်းပါအုံး”
“နာဂစ် ၀င်သွားခါစ က ညဘက်ဆို မီးတွေပျက်ပြီး မှောင်မဲနေတာပဲ၊ ငါတို့လင်မယား
နေတဲ့ တိုက်ခန်းက ငါးလွှာမှာ၊ ရေ လုံးဝ မလာဘူး၊ ဖင် ဆေးစရာ ရေတောင် မရှိဘူး၊
အရေးထဲ ကလေး ကလည်း နေမကောင်း၊ ဆေးခန်း သွားဖို့တောင် လမ်းတွေက
သစ်ပင်တွေ လဲပြီး ပိတ်ဆို့၊ ရွှေပေါက္ကံ မှာနေတဲ့ ငါ့ယောက္ခ ကြီးတွေ အိမ်က အမိုးတွေ
လန်သွားလို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင် ရမှန်းတောင် မသိဘူး၊ ငါစဉ်းစား မိတယ်၊ ငါတို့
မြန်မာပြည်မှာ နေတာ ဟုတ်ရော ဟုတ်ရယ့်လား ငရဲပြည်များ ရောက်နေ သလားလို့”
“အေး ငါတို့လည်း CNN တို့ BBC World News တို့ ကနေ ကြည့်ရပါတယ် ”
“အဲဒီလောက် ဒုက္ခ ရောက်နေတာတောင် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ကို
နာဂဖြစ်ဖြစ်ခြင်း လက်ခံဖို့ ငြင်းတာ တော်တော် စိတ်ကုန်ဖို့ ကောင်းတယ်”
“သူတို့ပထွေး တရုပ်အစိုးရ က ပြောတာတောင် မရဘူး၊ အဲဒါကြောင့် တချို့ ဒုက္ခသည်
တွေ ကယ်ဆယ်ရေး နောက်ကျလို့ ထပ်သေတာ အများကြီးတဲ့”
“ငါတို့ တိုင်းပြည်နဲ့ ငါတို့ လူမျိုး တခုခုများ မှားနေပြီးလား၊ ငါဆိုလိုတာက ဒီစစ်အစိုးရ
အရမ်းတော်ပြီး၊ ငါတို့ အရမ်းညံနေတာလား”
“အေး ငါလည်း အဲဒါဘဲ ပြောချင်နေတာ”
“ဟုတ်တယ် ငါလည်း ထောက်ခံတယ်၊ ငါတို့ ဒီပုံစံ အတိုင်း ဆက်သွားရင် ငါတို့ လူမျိုး
တွေ အနာဂတ် ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ၊ နင်တို့ စ ပြောကြ၊ ငါလည်း ၀င်ပြောမယ် အလှည့်
“ငါတို့ ပြည်သူတွေ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ရင် ဒီစစ်အစိုးရ မခံနိုင်ပါ
ဘူး ဟာ၊ စစ်သား တစ်ယောက်ကို ပြည်သူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် မိသားစု
တစ်စု က သေအောင် သတ်နိုင်ရင် ဒီစစ်တပ် ဘယ်လို့မှ ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး”
“လုပ်ပြီး နင်ကလည်း သူတို့က သေနတ်တွေနဲ့ လူတွေစီမှာ ဘာမှ မရှိဘူးလေ”
“အဓိက က စစ်တပ်ကွ၊ စစ်တပ်ထဲမှာ တန်ပြန် အာဏာသိမ်းပြီး ပြည်သူနဲ့ လက်တွဲ
ချင်တဲ့ သူတွေများ လာအောင် စည်းရုံးသင့်တယ်”
“ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်း အဲဒါကို ထောက်ခံတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အာဏာရူး နေတာ
အောက်ခြေက စစ်သားတွေ ဒီလောက် မရိုင်းပါဘူး ဟာ”
“နင်တို့ နိုင်ငံခြား ကနေ လျှောက်ပြီးပြောကြ၊ ဒီမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ တုံးက
စစ်တပ်က အရာရှိတွေလည်း ဘုန်းကြီးတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ရိုက်သတ်တာပဲ၊
စစ်သားတွေလည်း ပစ်တာပဲ၊ အထက်က ခိုင်းတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အမေ
ကိုယ့်ပြန်သတ်ဆို ရင် သတ်မလား၊ စဉ်းစာကြည့်ကြ”
“စစ်တပ် ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ်၊ ဖျက်သိမ်းပြစ်လို့ တော့ မရဘူးဟ”
“အပျိုကြီး နင် ဘုမသိ ဘမသိဘဲနဲ့ ဆရာ ၀င်မလုပ်နဲ့၊ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်
လုံးဝ မရှိဘူး ရဲပဲရှိတယ်၊ အဲလိုမျိုး နေရာတကာ ဆရာ လုပ်တတ်လို့ နင် ခုချိန်ထိ
“ဟား … ဟား .. ” (ရယ်သံများ)
“ သေ ... ...း” (ဆဲဆိုသံ)
“နင်လည်း အခုထိ မိန်းမ မရသေး ပါဘူး ငေ… … ရယ်၊ ကဲ့ တော်ပါတော့”
“ကဲ့ပါ ရှေ့ဆက်ပြီး ငါတို့ ဘာလုပ်ကြ မလဲ”
“နင်တို့ မြန်မာသံရုံး သွားပြီး အခွန် မဆောင်ကြနဲ့၊ သူတို့က နင်တို့စီက ရတဲ့ ပိုက်ဆံ
နဲ့ ကျည်ဆံ ၀ယ်ပြီး၊ အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ငါတို့ ပြည်သူတွေ ကို သတ်နေတာ”
“အခွန်မဆောင်ရင် ပတ်ပို့စ် ကို ဘယ်လို သက်တမ်းတိုး မလဲ၊ နင်ပြောတော့ လွယ်တယ်”
“အဲဒါလည်း ဟုတ်တယ် ငေ… … ၊ မိေ.. … နဲ့ ငါ က မြန်မာ ပတ်ပို့စ်တွေ ကိုင်ထားတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသား ကွ၊ မင်းလို ဂျာမနီမှာ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ ဒုက္ခသည် မဟုတ်ဘူး”
“ငါ့ အမြင်က တော့ အားလုံး က တခုခု ကို သေသေချာချာ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်သင့်
တယ်၊ အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆန္ဒခံယူပွဲ အတု လုပ်ပြီး စစ်တပ်က ရာသက်ပန်
အုပ်ချုပ်ဖို့ စနေပြီး၊ လာမဲ့ ၂၀၁၀ မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီး၊ သူတို့က ဆက် အုပ်
ချုပ် တော့ မယ့် အနေအထား လုံးဝ ရှိတယ်၊ ဒေါ်စု နဲ့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့
သူတို့ မစဉ်းစားဘူး၊ ဒီပုံစံ ဖြစ်နေပြီး၊ ခုလို အချိန်မှာ ယူအမ် ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာ
ငြိမ်းချမ်းတပ်ဖွဲ့ လာရင်လာ ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ နေတိုး စစ်တပ်
“ယူအမ်တပ် တို့ နေတိုးတပ် တို့ ဆိုတာ ငါတို့ ခေါ်ချင်တိုင် ခေါ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးကွ၊
ဆူဒန်တို့ ရ၀မ်ဒါတို့မှာ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ် အတွင်း လူတွေ သိန်းနဲ့ ချီပြီး အသတ်ခံရ
တာ တောင် ယူအမ်က ချက်ခြင်း တပ် မ၀င်ဘူး၊ နေ့ရွေ့ ညရွေ့ နဲ့၊ ဒါကို သန်းရွှေက
သိတယ်၊ ဒါကြောင့် ခုနက ငါပြောတာ စစ်တပ် ထဲမှာ ပြည်သူကို ချစ်တဲ့ အရာရှိတွေ အဲဒီ
လူယုတ်မာ အာဏာရူး သန်ရွှေ စီက တန်ပြန် အာဏာသိမ်းနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့
“စစ်တပ် ထဲမှာ ပြည်သူကို ချစ်တဲ့ အရာရှိတွေ ဘယ်နှစ်ယောက် လောက် ရှိနိုင်မလဲ”
“နင်တို့ ပြောသလို ရှိတယ် ထားအုံး၊ သူတို့ က ဘယ်လို အနေအထားမှာ ပြည်သူနဲ့
ဘယ်လို ပုံစံ လက်တွဲ မှာလဲ”
“အဲဒါ မာစတာ ကီးဘဲ၊ ငါ့အထင် ပြောရရင် လူထု က လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲ အကြီး
အကျယ် လုပ်လာမယ်၊ အောက်ခြေ အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံ ပျက်စီးမယ်၊ ဒီလိုကွာ
၈၈ တုံးက လေတပ်တို့ ရေတပ်တို့က စစ်သားတွေ ဆန္ဒပြ သူနဲ့ ပူးပေါင်းတာ မှတ်မိလား၊
အဲလို ပူးပေါင်းတဲ့ နေရာမှာ သူတို့ လက်နက်တွေကိုပါ တခါတည်း ယူလာပြီး လူထုနဲ့
ပေါင်းမယ်၊ လာပေါင်းတဲ့ စစ်သား အရေအတွက် က ထားပါတော့ ရာ ဂဏန်း ပေါ့၊ အဲဒီ
အုပ်စုက လူထုနဲ့ ပေါင်းမိပြီး မြို့ပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ တပ်မတော်ဖွဲ့မယ်၊ အင်းအားက
သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်း မျိုး ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် အဲဒါ စ ချလို့ ရပြီး၊ တဖက်နဲ့ တဖက်
အကြီးအကျယ် ချလို့ အခြေအနေ တွေ ရှုပ်ထွေး လာရင် ယူအမ်တို့ နေတိုးတို့လည်း
“အဲဒါမျိုး တကယ်လုပ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်တယ်ပေါ့”
Posted by ကိုအောင် at 23:272comments
(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ သချာင်္အသင်းရဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မန္တလေး ခရီးစဉ်)
မှတ်မှတ်ရရ အာဇာနည်နေ့မှာ ကျနော်တို့ လှိုင်နယ်မြေ တုံးက သချာင်္အဓိကယူခဲ့တဲ့
သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အင်တာနက်မှာ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ လူတွေကတော့ တော်တော်
စုံပါတယ်။ ပြည်ပ ရောက်နေတဲ့ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကန် ဘက်
တွေရော အစုံပဲ၊ မြန်မာပြည် ဘက် အတွင်းက … လေး .. ငါး …ယောက်လောက် အွန်
လိုင်းပေါ် တက်လာလိုက် ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့ တော်တော်ကြာအောင် စကားပြော
ဖြစ်ကြတယ်။ အင်္ဂလန် ရောက်နေတဲ့ မီးကွင်း (ကျောင်းတုံးက သချာင်္မေဂျာ မှာ ချောလို့
queen ဘွဲ့ ပေးထားတာ၊) က ကလေး နှစ်ယောက်နဲ့ တဗိုက် ဖြစ်နေပြီး။ ယူအက်စ်
ရောက် နေတဲ့ ကျော်ကြီးက မိန်းမ ရတာ ရေတွက် လို့မရ ဖြစ်နေတာ ရော အစုံပဲ ဟို
အကြောင်းရောက်သွားလိုက် ဒီအကြောင်း ရောက်သွားလိုက် ဆူညံ နေရောပဲ။ အော်
အချိန်တွေ ကုန်လွန်း လိုက်တာ တော်တော် မြန်ပါလား။ ဘာလိုလိုနဲ့ လှိုင်နယ်မြေကို
ခွဲခွါခဲ့ရတာ (၁၂)နှစ်တောင် ပြည့်တော့မယ်။
အားလုံး မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ကတော့ … မြန်မာပြည် ကို ဘယ်တော့ ပြန်ကြ မလဲ …။
ကျနော်က လွဲရင် ပြည်ပရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း အများစုက အလုပ်လုပ်ဖို့ ကျောင်း
ဆက်တက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ထွက်လာကြတာ။ တချို့လဲ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀နဲ့
ထွက်လာကြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည် နဲ့ ပက်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကြောင်း၊
နာဂစ် မုန်တိုင်းအကြောင်း သူတို့ ထင်ရာ မြင်ရာ မှန်းဆ မှုတွေကို ပြောကြပါတယ်။
“ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ဘယ်တော့ရမယ် ထင်လဲ … ”
“ အမေရိကန် စစ်တပ် ၀င်တိုက်ရင် ရမယ်လို့ ငါ ထင်တယ် ”
“ အမေရိကန် က သူ့စစ်သားတွေ အသေခံပြီး တကယ် တိုက် ပေး မှာလား ”
“ ငါတော့ မင်း ထင်သလို မထင်ဘူး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ မှာ တရုပ်နဲ့ ရုရှားကို ကြားနေ
မဲ ပေးဖို့ စည်းရုံးနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်ရင် ယူအမ် ငြိမ်းချမ်းရေး တပ် ၀င်လို့ရပြီး၊အဲဒါဆို
“အဲဒါမျိုးက ဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲ ကမ္ဘာ လဆန်း တစ်ရက်နေ့ လား ”
“နင် စကားကို အဲလို ကပ်ပြီး မပြောနဲ့၊ နင်လို လူမျိုးတွေ ရှိလို့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ
“မိေ.. …. တော်တော် သတ္တိရှိနေပါလား၊ စစ်တပ်ထဲက နင့်အကိုရော ဘယ်အဆင့်
“ ငါ့အကို စစ်သံမှူးရဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်နေပြီးဟ၊ အခုချိန် ဗုံးသွားကျဲလဲ သူ အပြင်
ရောက်နေပြီး၊ ငါတောင် ပြောနေသေးတယ်၊ နှစ်ပြည့်ရင် မပြန်နဲ့ ခိုလှုံခွင့်လျောက်
လို့၊ ဘယ်ရမလဲ၊ ငါ့နာမည်ေ.. …. လေ ”
“အေး အမေရိကန် က ဗုံးသွားကျဲမယ် ဆိုရင်၊ နင်တို့ အိမ်လိပ်စာ ငါပေးလိုက်မယ်၊
နင့်အမ အပျိုကြီးတွေ ရန်ကုန်က အိမ်မှာ နေတယ် မလား”
“သေနာ၊ မသာ ကောင်၊ ငါ့အမ အပျိုကြီးတွေ နာဂစ် ဖြစ်တုံးက သူတို့ အလုပ်လုပ်
တဲ့ ကုမ္ပဏီတောင် ဆန် သွားဝေတယ်၊ သူတော်ကောင်း တွေဟဲ့၊ သေနာရဲ့”
“ဗုံးကွဲ တဲ့ သတင်းတွေ ရော ဘာကြားသေးလဲဟေ့”
“ဟိုတလောက က ရွှေပြည်သာ ကြံဖွတ်ရုံးမှာ ဗုံးကွဲ တယ်ဆို”
“စစ်တပ်ထဲမှာ ဗုံးပေါက်ရင် ကောင်းမယ်နော်”
“နင်သွား ခွဲ ပါလား၊ လွယ်မလားလို့၊ ဒီလိုနေရာမျိုး ဗုံးသွားထောင်ဖို့ မလွယ်ဘူး”
“မလွယ်တာတော့ နင်ပြောမှလား ငါလဲ သိတာပေါ့၊ ပါလက်စတိုင်းတွေ လို
အသေခံပြီး ဗုံးခွဲ ရဲရင် ကောင်းမယ်နော်၊ လူတွေလဲ သနားပါတယ်၊ ဒီအစိုးရကို
ဘုရားလဲ နိုင်ပုံ မရဘူး၊ နတ်တွေ သကြားတွေလဲ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီးလဲ မသိဘူး”
“ဟဲ့ေ.. …း၊ ငါတို့ပြောနေတဲ့ အသံ ကြားရလား၊ နင် အခု မြန်မာပြည်မှာ ဘာ
“ဗိုလ်ချုပ် မယားငယ် တစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အ၀ယ်တော် လုပ်နေတယ်”
“ဘာ အ၀ယ်တော်လဲ၊ အတွင်းခံ အ၀ယ်တော် လား”
“နင်တို့ ညစ်ညစ်ပက်ပက် တွေ ပြောရင် ငါတို့ လိုင်းပေါ်က ဆင်းမှာနော်၊ ဒီမှာ
မိန်းကလေးတွေ အများကြီး ရှိတာ သတိ ထားအုံးနော်”
“ကဲ့ နင်တို့ ငြင်းကြမှာလားေ.. ..း ပြောတာ နာထောင်းမှာလား”
“ငါ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ က ပြည်လမ်းမှာ နာမည်က ...၊ ငါတို့ လုပ်ငန်းက လျှပ်
စစ် ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး၊ နာဂစ် ဖြစ်တော့ အစိုးရ က တရုပ်ပြည်နဲ့ သွပ်တို့
ဘိလပ်မြေ တို့ open trade ပေးထားလို့ အခု အဲဒါတွေ လုပ်နေတယ်”
“မင်းလစာ ဘယ်လောက်ရလဲ၊ မင်း ကလေး တစ်ယောက်နဲ့ဆို”
“ဘယ်ကလာ နှစ်ယောက်ကွ၊ အကြီးမ တောင် သူငယ်တန်း တက်နေပြီး၊ ပုံသေ
လစာ က တစ်လကို တစ်သိန်း နှစ်သောင်းရတယ်၊ အရောင်းအ၀ယ် အပေါ်မှာ
ကော်မရှင်ထပ် ပေးရင် နှစ်သိန်းကျော်လောက် ရတယ်၊ ဒီလောက် ရနေလို့ နမို့
သာ ဆိုရင် မလွယ်ဘူး”
“နင့်သမီး အကြီးမ လေးက ချောလားေ.. ..း၊ ငါ့သား အကြီးကောင်လေး နဲ့ ပေး
စားမယ်၊ နင့်သမီး က နင့်မိန်းမ … ..င် နဲ့ တူရင် တော်တော် ချောမယ်နော်”
“တော်ပါဟာ နင်တို့ စစ်မျိုးစစ်နွယ် တွေနဲ့ ပေးစားမယ့် အတူတူ၊ ခွေးကို အမြှီးဖြတ်
“ …. … ” (ရယ်သံများ)
“အံ့မယ်၊ နင်ကများ နင်အခု ဗိုလ်ချုပ် မယားငယ် ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး
စစ်တပ် မကောင်းကြောင်း ပြောနေသေးတယ်”
“တော်စမ်းပါဟာ မတတ်သာလို့ သူတို့စီမှာ အလုပ်လုပ်နေရတာ၊ နင်တို့လို နိုင်ငံ
ခြားနဲ့ အဆက်အသွယ် ကောင်းကောင်းမရှိလို့၊ ပြီးတော် မိန်းမယူတာ စော သွားလို့
နမို့ ဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်မှာ နေတောင် မနေချင်ဘူး၊ ဒီလောက် ယုတ်မာတဲ့ သတ္တ၀ါ
တွေ လက်အောက်မှာ ဘယ်သူမှ မနေချင်ဘူး၊ ရှင်းပြီးလား”
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အားလုံး ကောင်းရာ
Posted by ကိုအောင် at 02:24 1 comments
သခင်မြ သို့မဟုတ် မြန်မာပြည် မြေအောက်တော်လှန်ရေးဖခင် - အပိုင်း(၂)
အာဇာနည် သခင်မြ (၁၈၉၇- ၁၉၄၇)
၁၉၄၀ ပြည်နှစ် မေလ ၁၂ ရက်နေ့ သာယာဝတီမြို့၌ ကျင်းပသည့် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း
ဦးဆောင်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်
၁၄(ဋ) တွင် “ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်
ပြင်ဆင်ရန်” စသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အတွက် စတင်စီစဉ်
ကြ် ပါသည်။ ယင်း အစီအစဉ်တွင် သခင်မြခေါင်းဆောင်၍ သခင်နှင့်ကျောင်းသားလူငယ်
အချို့ ပါဝင်သော ယူဂျီ (U.G= Underground ) ခေါ် မြေအောက် လျို့ဝှက် အဖွဲ့တခုကို
လည်း လျို့ဝှက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အတွက် ဂျပန် နိုင်ငံမှ
ပြည်တွင်းသို့ လျို့ဝှက်စွာ ပြန်လည် ၀င်ရောက် လာသော သခင်အောင်ဆန်း ပုသိမ်
ဆိပ်ကမ်းမှ ရန်ကုန်သို့ မီးရထား ဖြင့် လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ အနောက်ပိုင်း လှည်းတန်းလမ်း
အမှတ်(၉၃)တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသော သခင်မြ နှင့် လျို့ဝှက်စွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
သခင်အောင်ဆန်းရောက် လာသည့် အခါ လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေးအတွက်
လျို့ဝှက်ကြိုးပမ်း နေကြသော သခင်မြ ခေါင်းဆောင်သည့် ရဲဘော် များ၏ ဆွေးနွေးပွဲ
တစ်ရပ် ကို သင်္ကန်းကျွန်းဘူတာ အနီး အိမ်တအိမ်တွင် ပြုလုပ် ကြပါသည်။ ထိုဆွေးနွေး
(၁) သခင်မြ (လက်နက်ကိုင်တော်လှန်းရေး အတွက် ပြည်တွင်း ခေါင်းဆောင်)
(၂) သခင်အောင်ဆန်း (ပြည်ပဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်)
(၅) သခင်ချစ် (ဆရာချစ်)
(၆) မစ္စတာ ဆူဂီ (ဂျပန်လူမျိုး- မီနာမီကီကန် အဖွဲ့ဝင်)
တို့ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲမှ အချက် (၆) ပါ သဘောတူညီမှုကို ရရှိခဲ့
သခင်မြ ခေါင်းသော လျို့ဝှက် တော်လှန် ရေးအဖွဲ့မှ ဂျပန်သို့လွှတ်ရန် လူငယ်များ ရွေး
ချယ်ရာတွင် နိုင်ငံရေး အရ အစိုးရက ဖမ်းဆီးရန် ၀ါးရမ်း ထုတ်ထား၍ အလုပ် မလုပ်နိုင်ပဲ
တိမ်းရှောင် နေရသူများ၊ နိုင်ငံရေး နယ်တွင် အစိုးရ အာရုံ စူးစိုက်ခြင်း နည်းပါး သေးသူ
သခင်နှင့်ကျောင်းသားလူငယ် များထဲမှ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်း၍ စစ်ရေးနှင့် သင့်တော် သူ
များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရန်သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါသည်။ သခင် အောင်ဆန်းအား ဗမာ့
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းရာ တွင် ပြည်ပဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ အဖြစ် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်
ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။
ပဲခူးမြို့ ၌ သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်သော တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ နိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ၁၉၄၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၀ရက်
နေ့တွင် သခင်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ပထမအသုတ် အဖြစ် သခင်လှဖေ (ဗိုလ်လက်ျာ)၊
သခင်ဗဂျမ်း (ဗိုလ်လရောင်)၊ သခင်အေးမောင် (ဗိုလ်မိုး)၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်
ကိုထွန်းရှိန် (ဗိုလ်ရန်နိုင်) တို့သည် ဂျပန်ပြည် သို့ စစ်ပညာ သင်ရန် ထွက်ခွါ သွား
၁၉၄၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ နိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ အစည်း အဝေးကို ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်းရပ်၊ မင်းလမ်း၊
တောင်ငူ တောင်ပိုင်း အမတ် ဦးဘ၏ တိုက်တွင် တံခါးပိတ် ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်
က တို့ဗမာ အစည်းအရုံး ဗဟို ဌါနချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ မှာ သခင်တင်မောင်(ပန်းတနော်) ဖြစ်
ပါသည်။သခင် တင်မောင်သည် သခင်အောင်ဆန်းတို့ တရုပ်ပြည် သွားရာမှ ဂျပန်ရောက်
ကာ မလွှဲမရှောင် သာ ဂျပန်နှင့် အဆက် အသွယ်ပြုရ သည်ကို လုံးဝ လက်မခံသူ တစ်ဦး
ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သခင်တင်မောင်က ကျန် အလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ အနေ
ဖြင့် လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေး ကို ညီညွတ်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီး၏
ခေါင်းဆောင်မှု ဖြင့် ဆင်နွဲနိုင်ရန် သခင်မြ အား ဌါနချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်နှင့် တော်လှန်
ရေး ခေါင်းဆောင် တာဝန်ကို ပူးတွဲ ထမ်းဆောင်ရန် ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ ပါသည်။
သခင်မြ သည် ထိုအချိန်က တို့ဗမာ အစည်း အရုံး၏ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်း အဖွဲ့ဝင်
လက်ရှိ ပါလီမန် တစ်ဦး ဖြစ်နေပါသည်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်မှု
ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများတွင် “ဥက္ကဋ္ဌ သည် ပါလီမန် အမတ်တဦး မဖြစ်စေရ” ဟု ပါရှိနေ
ပါသည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမှုဆောင် အားလုံးက သခင်မြ၏ခေါင်းဆောင်မှုကို
သံသယ ကင်းစွာ လက်ခံကြသည်။သို့ရာတွင်လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး
အတွက် သခင်မြနှင့် လျို့ဝှက်ရဲဘော်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များကို တို့ဗမာအစည်း
အရုံး နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ရှေ့တန်း ခေါင်းဆောင်
အချို့သာ တစိတ်တပိုင်း သိရှိကြပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော
(၁၂) ခရိုင်မှ တို့ဗမာ အစည်း အရုံး၏ ခေါင်းဆောင် အချို့သည် သခင်မြ ဦးဆောင်
သော လျို့ဝှက်လုပ်ငန်း အစီ အစဉ်နှင့် ပက်သက်၍ သိသင့် သိထိုက်သည့် များကို
အစည်းအဝေးအတွင်း မေးမြန်းရန် အခက်ကြုံ နေသဖြင့် “ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ရေး” စည်းမျဉ်း
ကို ထောက်ပြ၍ အပြင်း အထန်း ဆွေးနွေး လာပါသည်။
သခင်မြနှင့် ဌါနချုပ် အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့သည် ထိုအချက်ကို ကောင်းစွာ သိရှိ
သဖြင့် (၁၂) ခရိုင်မှ ခေါင်းဆောင် အချို့ကိုသီးခြားခွဲကာ သခင်မြကိုယ်တိုင် အခြေအနေ
အရပ်ရပ် ကို ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ သခင်မြက ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် လက်နက်ကိုင်
တော်လှန်ရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး သခင် အောင်ဆန်း တရုပ်ပြည်သို့ ဦးစွာ ရောက်ရှိ ခဲ့
ကြောင်း၊ အဆက်အသွယ်ရယူရန် အချိန် ကြာညောင်း မှုကြောင့် အခြေအနေ အရ ဂျပန်
အစိုး၏ အကူအညီဖြင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကို ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရကြောင်း၊
ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကြေငြာမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည့်တို့ကို ဖွင့်ဟ
ဆွေးနွေး ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များက “အကယ်၍ ဂျပန်က ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးကို
အသိအမှတ်မပြုလျင် မည်သို့ ပြုလုပ်မည်နည်း” ဟု မေးမြန်းရသည့် အခါ သခင်မြ က
“ ဂျပန်က လွတ်လပ်ရေး အသိအမှတ် မပြုလျှင် ဂျပန်ကို တိုက်မည်” ဟု တိုတိုတုတ်
သခင်မြ၏ ရဲဝင့် ပြတ်သားသည့် အဖြေကို ကိုယ်စားလှယ် များ ကျေနပ် ကြပြီး စည်းမျဉ်း
ဥပဒေပါ “ဥက္ကဋ္ဌ သည် ပါလီမန် အမတ် တဦး မဖြစ်စေရ” အပိုဒ်ကို ယာယီ ရပ်စဲပြီး
သခင်မြ အားတို့ဗမာ အစည်းအရုံး ဌါနချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်၎င်း၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့
ခေါင်းဆောင်အဖြစ်၎င်း တာဝန် ပေးအပ် ကြပါသည်။ ယင်း အစည်းအဝေး၏ နောက်ဆုံး
နေ့ဖြစ်သော ၁၉၄၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ မှစ၍ တို့ဗမာအစည်း အရုံးကြီး၏ ဒုတိယ
အကြိမ်မြောက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမား ညီလာခံ ကို ပဲခူးမြို့ ရွှေမော
ဓေါ စေတီတော် ခြေရင်းတွင် ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ တောင်သူ လယ်သမား အစည်း အရုံး
ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌမှာ သခင်မြ ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကြီးလေး ခက်ခဲသော တော်လှန်
ရေး တာဝန် အရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူ ခေါင်းဆောင် ရတော့မည် ဖြစ်ခြင်း တို့ကြောင့်
တောင်သူ လယ်သမား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို သခင်တင် (သုံးဆယ်) အား
လွှဲအပ်၍ အစည်းအရုံး နာယက အဖြစ် သာ လက်ခံရန် စီစဉ် ခဲ့ကြပါသည်။
သခင်မြ ခေါင်းဆောင်သော “ မြေအောက် ယူနစ် ဗဟို အာဏာပိုင် အဖွဲ့ (Supreme
Council of Underground Unit ) တွင်
(၁) သခင်မြ (ဥက္ကဋ္ဌ)
(၂) သခင်ထွန်းရွှေ ခေါ် ဆရာထွန်းရွှေ ( စည်းရုံးရေး ဌါန)
(၃) သခင်ချစ် ခေါ် ဆရာချစ် (စည်းရုံးရေး ဌါန)
(၄) သခင်ဗဟိန်း ခေါ် ကိုဗဟိန်း (၀ါဒ ပြန့်ပွားရေး ဌါန)
(၅) ကိုထွန်းအုံ - တက္ကသိုလ်သမ၀ါယမ (ဘဏ္ဍာရေး ဌါန)
(၆) သခင်ဗဆွေ ခေါ် ကိုဗဆွေ - တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးဟောင်း
(၇) ကိုကျော်ငြိမ်း (နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး)
(တို့ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်း ပ-ဒု နှစ်တွဲ နှင့် သခင်တင်မြ ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် တို့မှ
Posted by ကိုအောင် at 20:530comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၁၉၁၅- ၁၉၄၇)
-၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ည (ရန်ကုန်၊ ကြည်မြင်တိုင်၊ ဟုမ်းလမ်း
မီးရထားဂုံးထိပ်ရှိ ဂျပန်ပြန် ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးမြင့်အောင် နေအိမ်)
ဖယောင်းတိုင်မှ ထွက်လာသည့် အလင်းရောင် မှိန်မှိန်တွင်ဖြစ်သဖြင့် ခေါင်းဆောင်
များ၏ မျက်နှာ အမူအရာများ မည်သို့ရှိနေသည် ကို အထင်အရှား မမြင်ရစေကာမူ
ကိုယ်ဟန်လှုပ်ရှားမူများကို ကြည့်ရခြင်းဖြင့်ပင် တက်ကြွဖျတ်လတ်နေကြောင်း၊
ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးသည့် သဘောထားများကို ဆွေးနွေး
ဆုံးဖြတ်ကြရန် စိတ်အာရုံစောလျက်ရှိကြ ကြောင်းကို အထင်အရှား တွေ့နေရပါ
သည်။ ကျွန်တော် (သခင်တင်မြ) ၏ အတွင်းစိတ်များလည်း တက်ကြွ လှုပ်ရှားလျက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် သခင်စိုးတို့က စာပွဲဝိုင်းကလေး ပတ်လည်မှာရှိသော ကုလား
ထိုင်များတွင် အရင် ထိုင်လိုက်ကြသည်။ သခင်သန်းထွန်း က ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင်
နောက်မှ ၀င်ထိုက်လိုက်လေသည်။ ဗိုလ်မှူးရဲထွဋ် နှင့် ကျွန်တော်သည် ကိစ္စတစ်ခုကို
အခန်းထောင့်တွင် ဆွေးနွေးနေကြစဉ် သခင်စိုးက လှမ်းခေါ်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နှစ်
ယောက် စကားစကို ဖြတ်ပြီးလူကြီးများ ၀ိုင်းထိုင်နေသော စားပွဲဆီသို့လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှေ့ရှိ ကုလားထိုင်ပု ကလေးတွင် ထိုင်ရန် ခါးကို
ကိုင်းလိုက်မိပါသည်။ ထိုအခိုက် ကျွန်တော်စစ် အင်္ကျီဘယ်ဘက်အိတ် အတွင်းမှ
မော်ဇာ ပစ္စတိုကလေးမှာ လျှောခနဲထွက်သွားပြီး စားပွဲပေါ်ရှိ မှန်ချပ်ကြီးပေါ်သို့
ဖြန်းခနဲ ကျသွားပါသည်။ ပစ္စတိုပြောင်းဝမှ မီးလက်ခနဲ လင်းသွားပြီး၊ သေနတ်သံ
ဒိုင်းခနဲ မြည်ဟည်းသွားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကြက်သေ သေပြီး တိတ်
ဆိတ်သွား ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထူပူချောက်ချား သွားပါသည်။
ကျွန်တော် အသေအချာမြင်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ပွင့်နေသော အင်္ကျီအိတ်
ထဲမှ လျှောထွက်သွားသော ပစ္စတိုကလေးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သခင်စိုး
တို့ ယှဉ်ထိုင်နေသောဘက်ဆီသို့ ပြောင်းလှည့်၍ စားပွဲဝိုင်းတွင် ခင်းထားသည့်
မှန်ချပ်ကြီးပေါ် ကျသွားပြီး ဒိုင်းခနဲကျည်ဆံထွက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းမှာ ကုလားထိုင် လက်ရန်း နှစ်ဖက်ပေါ် လက်တင်ပြီး မှန်ချပ်ပေါ်တွင်
သေနတ်ပေါက်ကွဲမှု အရှိန်ဖြင့် ချာချာလည်နေသော ပစ္စတိုသေနတ် ကလေးကို
သခင်စိုး အသံက ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ “ဘယ်သူ့ ထိသွားသလဲဟင်။
ဘယ်သူ့ထိသွားသလဲ” ဟု မေးရင် ကျွန်တော်ကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး “ခင်ဗျာ လုပ်လိုက်
ရင် သောက်ရမ်းချည်းပဲ။ ခင်ဗျာ တော်တော် အသုံးမကျတာပဲ” ဟု ကြိမ်းမောင်း
ကျွန်တော်က ဘာမျှပြန်မပြောနိုင်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ငြိမ်သက်နေသဖြင့်
“သေနတ်ထိသွား ပြီးလား” ဟူသော စိုးရိမ်း ချောက်ချားစိတ်က လွှမ်းမိုးနေ
“ဗိုလ်ချုပ် ထိသွားသလား” ဟု ကျွန်တော်က စိုးရိမ်းသံဖြင့် မေးလိုက်မှ ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းသည် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာပြီး “ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ကျုပ်တော့
မထိဘူး” ဟု ဖြေပါသည်။
ဗိုလ်မှူးရဲထွဋ် က “ဟိုမှာ ဟိုမှာ။ ကျည်ဆံ ပေါက်သွားတဲ့နေရာ မှန်ကွဲနေတယ်”
ဟု လက်ညှိုး ထိုးပြ မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သခင်စိုးတို့ နောက်ဘက်ရှိ ပြတင်း
ပေါက် မှန်တံခါးကွဲ နေသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ပေါက်ကွဲ ထွက်သွားသော ကျည်ဆံ
မှာ ဘယ်သူ့ကိုမျှ ထိမှန်ခြင်း မရှိသည်ကို သိရမှ စိုးရိမ်းစိတ်ဖြင့် ချွေးပြန်နေသော
တိုက်အောက်က လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေသော စစ်ဗိုလ်ကလေးမှာ အပေါ်ထပ်သို့
အူလျားဖား လျား ပြေးတက်လာပါသည်။ ဗိုလ်မှူး ရဲထွဋ် က မတော်တဆ သေနတ်
ထွက်သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်းဆီးပြောလိုက်မှ ထိုဗိုလ်ကလေးမှာ ယောင်ချားချားနှင့်
အောက်သို့ ပြန်ဆင်းသွား ပါသည်။
သခင်စိုးသည် ကျွန်တော့်ကို ပေါ့ဆ ရပါမည်လားဟု ဆက်၍ ဆူပူနေပါသေးသည်။
ဤသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ ကျွန်တော်၏ သတိလစ်ဟင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်
သည် သွားလေရာရာတွင် ပစ္စတို သေနတ် နှစ်လက်ကို အမြဲတမ်း ယူဆောင်လေ့
ရှိပါသည်။ နှစ်လက်လုံးကို ကျည်ဆံထိုးပြီး မောင်းထိန်း ခလုပ်ပိတ်ကာ အသင့်လုပ်
ထား ပါသည်။ ၇ ဒဿမ ၅ ပစ္စတို အသေးကလေးကို အင်္ကျီအိတ်ထဲ ထည့်၍ ကြယ်
သီးပိတ်ထားပြီး၊ ပစ္စတို အကြီးကိုမူ သားရေလက်ဆွဲအိတ် ထဲတွင် ထည့်ထားပါသည်။
အရေးအကြောင်း ပေါ်ပါက အလွယ်တကူ ထုတ်သုံး နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ကျီကြယ်သီး ဘယ်အချိန်က ပြုတ်နေမှန်း မသိပါ။ ကုလားထိုင်ကို ထိုင်ရန် ခါး
အကုန်းလိုက်တွင် ပွင့်နေသော အိတ်ထဲမှ သေနတ်မှာ အလေးချိန်ဖြင့် လျှောထွက်
သွားပြီး မှန်ချပ်ပေါ်ကျ၍ မောင်းထိန်း ခလုတ် ပြုတ်ကာ ကျည်ဆံ ထွက်သွားခြင်း
ကျွန်တော်သည် ပစ္စတို သေနတ်ပြောင်းထဲ အလိုအလျောက် ၀င်နေသော
ကျည်ဆံကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး သေနတ် ယမ်းကတ်များ နုတ်၍ သေနတ်ကို
သားရေလက်ဆွဲအိတ် ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါသည်။
သခင်စိုးသည် ကျွန်တော် (သခင်တင်မြ)၏ ပေါ့လျှော့မှုကို မကျေနိုင် မချမ်းနိုင်
ဖြစ်နေပါသေးသည်။ သေနတ်သံ ကြားသဖြင့် ဂျပန်တွေများ လာစုံစမ်းမလား
ဟု စိုးရိမ်းနေပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သခင်သန်းထွန်းတို့ ကမူ
သေနတ် မတော်တဆ ထွက်သွားခြင်းကို အရေးကြီး လှသည်ဟု သဘော
မထားကြပါ။ စစ်ဗိုလ်အိမ်က သေနတ်သံ တစ်ချက်ကြားရုံဖြင့်လည်း ဂျပန်
များက ဂရုစိုက်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု သဘောထားကြဟန် တူပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်စိုးနှင့် သခင်သန်းထွန်းတို့သည် မဟာမိတ်
စစ်ဌာနချုပ်က ပေးလိုက်သော စာနှင့် ကိုသိန်းဖေထံမှ ပေးလိုက်သော စာပါ
သဘောထားများကို အခြေခံ၍ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား လက်နက်ကိုင်၍ အမြန်
ဆုံး တော်လှန်တိုက်ခိုက်ကြရန် သင့်၊ မသင့် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။
(သခင်တင်မြ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် စာအုပ်မှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြထားပါသည်
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာရေးသူထံမှ တိုက်ရိုက် ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံ
Posted by ကိုအောင် at 01:420comments
သခင်မြ သို့မဟုတ် မြန်မာပြည် မြေအောက်တော်လှန်ရေးဖခင် - အပိုင်း(၁)
ကွယ်လွန်သူ အမျိုးသား အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ ကို ပဲခူးတိုင်း
ပြည်ခရိုင် ထုံးဘိုရွာ တွင် အဖ ဦးဘိုးချွန်နှင့် အမိ ဒေါ်သက်လယ် တို့မှ ၁၈၉၇
ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ငယ်နာမည်မှာ
မောင်ဘရွှေ ဖြစ်ပါသည်။ ညီမ ဖြစ်သူ မမြငွေ တဦးသာ ရှိ၍ နောင်အခါ
သီလရှင် ၀တ်သွားပြီး ဒေါ်ခေမာဝတီ ဟု သိရပါသည်။ ဆရာကြီး သခင်မြ
သည် ငယ်စဉ်က သာယာဝတီ အေဘီအမ် ကျောင်းတွင် သတ္တမတန်း အောင်
မြင်ပြီး ဆယ်တန်းကို ရန်ကုန်ဘက်ပတစ် အထက်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်ခဲ့
ပါသည်။ ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ကော်လိပ်နှင့် ကာလကတ္တားတက္ကသိုလ်
တို့မှ အိုင်အက်စီတန်း ကို ဓါတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၀
ပြည်နှစ် ပထမ ကျောင်းသားသပိတ် ကာလ အတွင်း တက္ကသိုလ် သပိတ်မှောက်
ကောင်စီတွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသပိတ် နောက်ပိုင်း
ပေါ်လာသော အမျိုးသားပညာ ရေး ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရုံမက ကြည့်မြင်
တိုင် အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဘီအက်စီတန်းကို ဂုဏ်ထူးဖြင့် အမျိုးသား ကော်လိပ်မှ အောင်မြင်
ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ခင်ညွန့်နှင့် လက်ထပ် ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်
တွင် ဥပဒေ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ အောင်ပြီးသောအခါ သာယာဝတီ သို့ ပြန်၍ ရှေ့နေအလုပ်
ဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ ပါသည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် တောင်သူလယ်သမား အရေးတော်ပုံ
ရှုံးနိမ့်ချိန်တွင် အရေးတော်ပုံ အကျဉ်းစံ များဘက်မှ အခမဲ့ ရှေ့နေ လိုက်ရာမှ
ထင်ရှားလာခဲ့ ပါသည်။၁၉၃၄ ခုနှစ် မတ်လ နွေရာသီ တွင် စီစဉ် ပြုလုပ်ခဲ့သော
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကြီး၏ ခရီးရှည်
စည်းရုံး ကာလ အတွင်း သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း
၀တ်လုံ ကိုမြ သည် သခင်မြ ဟူသော သခင်ဘွဲ့ကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်
ဇွန်လ မြင်းခြံမြို့ တွင် ကျင်းပခဲ့သော တို့ဗမာအစည်းအရုံး ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်
ညီလာခံ က ရွေးချယ်သော ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အဖွဲ့ တွင်
သာယာဝတီ စီရင်စု ၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် နံပါတ်စဉ် အမှတ်(၃၀) သခင်မြ
သည် သခင်စောကြီး၊ သခင်စိန့်၊ သခင်ခင်အောင်၊ သခင်ဗထွန်း၊ သခင်ထွန်း
ဆိုင်၊ သခင်ကျော်ဒင်၊ သခင်ချစ်လှိုင် တို့နှင့်အတူ ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။
၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တွင် တို့ဗမာအစည်း အရုံး က အောက်လွှတ်တော်၏
၉၁ ဌါန အမတ် ခွဲတမ်း စနစ် ကို တိုက်ဖျက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကိုယ့်မင်းကိုယ့်
ချင်း အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း အဖွဲ့ ၏ တာဝန်ပေးချက်
အရ သာယာဝတီ တောင်ပိုင်း အမတ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံရပြီး
ဥပဒေပြု အောက်လွှတ်တော်၏ ပထမဆုံး အရွေးချယ်ခံ သခင်အမတ် သုံးဦး
အနက် တစ်ဦး အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်း အဖွဲ့ကို စတင်
တည်ထောင်စဉ်က သခင်ဟန်နှင့် သခင်ကံတင့် တို့က ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး
တာဝန်များ ယူခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သခင်မြ က ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ပေးမှု ကို ခံယူ ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၈ ဇန်န၀ါရီ
(၈)ရက် နေ့ တွင် စတင်ခဲ့သော ချောက်ရေနံမြေ သပိတ်တိုက်ပွဲကာလ တွင်
အလုပ်သမားများ၏ တောင်းဆို ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ခံ
အမှုဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် ရှစ်ဦးကော်မတီတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကြီး၏ တတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်ညီလာခံတွင်
သခင်မြ သည် ဌါနချုပ်၏ အမှုဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်း ခံ
ရပါသည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီး နှစ်အုပ်စုမကွဲခင် ၁၉၃၈ ခုနှစ် သြဂုတ်
လ မှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဌါနချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့
တွင် သခင်မြ သည် စာရင်းစစ် အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ လစာမယူသော
ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အောက်လွှတ်တော် အမတ် သခင်မြ၊
သခင်အံ့ကြီး၊ဘုရင်ခံကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားသော အထက်လွှတ်တော်
အမတ် မြို့မကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဘလွင် တို့သည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခဲ့သော အတွင်းဝန်ရုံး(ယနေ့ ခေတ် ၀န်ကြီးများရုံး)
ပြဿနာ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါလီမန်အမတ် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်စာတင်းသွင်းခဲ့ပါ
သည်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကြီး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ
တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံး ကို ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့
သခင်မြ အား အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်မှုဆောင်
(၁၀)သခင် ကျော်လူကလေး (သံလျင်)
(၁၂)သခင်ဗငြိမ်း (မအူပင်) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
(တို့ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်း ပ-ဒု နှစ်တွဲ နှင့် သခင်တင်မြ ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့်
Posted by ကိုအောင် at 00:540comments
(ရေးသူ-ကြည်မောင်သန်း ၂၀၀၈ ဇွန်လ ထုတ် ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်းမှ)
ပုံပြင်ထဲက မြို့လည်း မဟုတ်
ဒဏ္ဍာရီထဲ မြို့လည်း မဟုတ်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ကတည်းက ရှိတဲ့ မြို့တမြို့
ဒီမြို့ကို ကတူးလူမျိုးတွေ တည်ထောင်ခဲ့တယ်
ရေသောက်မယ့် ဟန် မြည်သံပေးတာကို အစွဲပြုလို့
သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ပေါများ
ရဟန်း ပညာရှိ လူပညာရှိ တွေ ထွန်းကား
တခြားမြို့တွေနဲ့ စီးပွားရေး ကူးသန်း သွားလာဖို့ လွယ်ကူ
ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ
နေမျိုးသူရ ရဲခေါင်ဘွဲ့နဲ့ ဒီမြို့ရဲ့ မြို့ဝန်။
ဘုံခန်းပျို့ဆရာ အရှင် အဂ္ဂသဓာဓိ
မုံတိုင်ပင် ဆရာ အရှင်ဝံသ
ဒါ ဒီမြို့သား ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေ။
မင်းတုန်းမင်းကို ပုန်ကန် ခြားနားတဲ့
ကောက်ကျစ် ယုတ်မာတဲ့ မြို့ဝန် ဦးမှန်း
သစ္စာဖောက်တွေ အတောင် ပေါက်ခဲ့ကြတယ်။
သူ့ ဆိုင်ကယ် ကျပျောက်ခဲ့ရတယ်။
သေကံ မရောက် သက် မပျောက် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ရုတ်တရက် မိုးကြီး ရွာချလိုက်တယ်
တိမ်ကော ပပျောက်သွားအောင် ရွာတဲ့ မိုး မို့
အညာအခေါ် ဆင်ရာတိမ်မိုး တဲ့ လေ။
ဒီမြို့ကို ကားပေါ်က လှမ်း ကြည့်မိတဲ့အခါ
အတိတ်တစ္ဆေက ငါ့ကို ခြောက်လှန့် နေလေရဲ့။ ။
(ဘားမားတူးဒေး အင်တာနက် စာမျက်နှာမှ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြထားပါသည်၊
အကြောင်းကြောင်း ကြောင့်ကဗျာ ပိုင်ရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် မယူထားမှုကို နား
လည်း ခွင့်လွတ်ပါ ခင်ဗျာ။)
Posted by ကိုအောင် at 20:300comments